China Umenzi weBlue Crystal kunye noMthengisi | Ukutya
Ulwakhiwo lweCrystal: Monoclinic, Inqaku leqela 2
Ipharamitha yomgama: Monoclinic, Inqaku leqela 2
Indawo yokunyibilika: Monoclinic, Inqaku leqela 2
Ubunzima be-Mohs: 5-5.5
Ukuxinana: I-5.033 g / cm3
Ulwandiso lwee-coefficients: αa = 4.8 x 10-5 / K, αb = 4.4 x 10-6 / K, αc = -2.69 x 10-5 / K
I-BiB3O6 (i-BIBO) yikristale ye-nonlinear ebonakalayo esanda kuphuhliswa. Inomlingani omkhulu osebenzayo ongahambelaniyo nomda, umonakalo omkhulu kunye nokungena ngokungqinelana nokufuma. Umlinganiso wayo ongahambelaniyo nomgama ungama-3.5 - 4 amaxesha aphakamileyo kunalawo e-LBO, 1.5 -2 amaxesha aphakamileyo kunalawo e-BBO. Yikristale ethembisayo ephindaphindayo yokuvelisa i-laser eluhlaza okwesibhakabhaka.
I-BiB3O6 (BIBO) luhlobo olugqwesileyo lwe-Optical Crystal engacacanga. Amakristalu e-NLO BIBO Amakristali ane-coeffcient enkulu engasebenziyo, uphawu oluphambili lwesicelo se-NLO sobubanzi obubanzi ukusuka kwi-286nm ukuya kwi-2500nm, umda omkhulu womonakalo kunye nokungena ngokubhekisele kufuma. Umlinganiso wayo ongahambelaniyo namaxesha angama-3.5-4 aphezulu kunaleyo yekristale ye-LBO, 1.5-2 amaxesha aphakamileyo kunalawo e-BBO crystal. Yikristale ethembisayo ephindaphindayo yokuvelisa i-laser eluhlaza okwesibhakabhaka i-473nm, 390nm.
I-BiB3O6 (i-BIBO) ye-SHG ixhaphake kakhulu, ngakumbi i-Nonlinear Optical BIBO Crystal Isizukulwane sesibini se-harmonic kwi-1064nm, 946nm kunye ne-780nm.
Inxalenye yolu hlobo lweCrystal Crystal BIBO Crystal imi ngolu hlobo lulandelayo:
Umlingani omkhulu osebenzayo we-SHG (malunga namaxesha ali-9 e-KDP);
Ububanzi bebhendi ebanzi;
Ukungena ngokumalunga nokufuma.
I-SHG yamandla aphakathi kunye aphezulu u-Nd: lasers kwi-1064nm;
SHG yamandla aphakamileyo Nd: lasers e 1342nm & 1319nm for ebomvu neluhlaza laser;
I-SHG ye-Nd: I-Lasers kwi-914nm kunye ne-946nm ye-laser eluhlaza okwesibhakabhaka;
I-Optical Parametric Amplifiers (OPA) kunye nesicelo se-Oscillators (OPO).
Ulwakhiwo lweCrystal Imonoclinic ，Indawo yeqela 2
Ipharamitha yeLattice a = 7.116Å, b = 4.993Å, c = 6.508Å, β = 105.62 °, Z = 2
Indawo yokunyibilika 726 ℃
Ukuxinana I-5.033 g / cm3
Ukwanda koLungelelwaniso lobushushu αa = 4.8 x 10-5 / K, αb = 4.4 x 10-6 / K, αc = -2.69 x 10-5 / K
Uluhlu olungafihliyo Ngama-286- 2500 nm
Ukungqinisisa ukungalingani <0.1% / cm kwi-1064nm
I-SHG ye-1064 / 532nm I-engile ehambelana nesigaba: 168.9 ° ukusuka kwi-axis ye-Z kwisicwangciso se-YZI-Deff: 3.0 +/- 0.1 pm / V Ukwamkelwa kwe-angular: 2.32 mrad · cmI-angle-off angle: 25.6 mradUkwamkelwa kobushushu: 2.17 ℃ · cm
I-axis yomzimba X∥b, (Z, a) = 31.6 °, (Y, c) = 47.2 °
Cacisa ukuvula embindini 90% ubukhulu
I-Chamfer ≤0.2mmx45 °
Umqobo womonakalo [GW / cm2] > 0.3 ye1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ